Home Wararka Doorashada Madaxweynaha Turkiga oo Maanta Dhaceysa
Doorashada Madaxweynaha Turkiga oo Maanta Dhaceysa
Wadanka Turkiga ayaa guud ahaan Saaka waxaa loo dareerayaa Goobaha codbixinta ee loogu talagalay in cododka lagu dhiibtay.
Shacabka Turkida ayaa isu diyaaranaya sidii ay usoo dooran lahaayeen Madaxweeynaha Cusub ee dalka iyo Sidii ay usoo xuli lahaayeen Xubnaha Golaha Barlamaanka ee dalkaasi.
Sadaasha ayaa waxaa loo badinayaa in Markale uu Madaxweeyne noqon Mudane Racep Tayyip Ordagn kaa oo dalkaasi soo Maamulayay tan iyo sanadkii 2003-dii.
Guud ahaan amaanka ayaa siweyn loo adkeeyay hayadaha amaankuna waxa ay sheegayaan in ay diyaar uyihiin sidii ay uga hortagi lahaayeen Fad qalalo ka dhaca Goobaha Codka laga dhiibanayo.
Previous articleFarmaajo oo Aan ka hadlin Qaraxyada ka dhaca Muqdisho oo Cambaareyay Qaraxyo ka dhacay wadamo kale
Next articleAqriso:Xildhaano Wado Mooshin ka dhan ah Hishiiskii Farmaao uu lagalay Itoobiya oo Muqdisho sharar ku leh
Wasaaradda Boostada Iyo Isgaarsiinta oo Digniin Udirtay Maamulka Somaliland
Soomaaliya oo loo diiday in ay ka qeeyb-gasho shir ka dhacaya...